Mihaika ny Dinam-Piarahamonina Ao Venezoelà ny Kandidà Iray Nanova Taovam-Pananahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2015 16:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Deutsch, 繁體中文, 日本語, 简体中文, Español
Tamara Adrián, afovoany, nandritra ny iray amin'ireo fitetezana fampahafantarana ny firotsahany ho kandidà ho ao amin'ny Antenimieram-pirenena ao Venezoelà. Sary avy amin'ny kaontiny Facebook.
Fotoan-dehibe ho an'i Tamara Adrián, ny mahita ny anarany voasoratra ao amin'ny vatom-pifidianana amin'ny fifidianana parlemantera hotontosaina amin'ny 6 Desambra 2015 ao Venezoela — tsy amin'ny maha-trans voalohany nirotsaka ho kandidà azy eo amin'ny tantaran'ny firenena ihany, izay efa zavabita rahateo, fa ny fahitana ihany koa fa farafaharatsiny mba mifandraika amin'ny karazam-pananahana misy azy ny mari-panondroana azy ao amin'io antonta-taratasy io.
Tsy izany manko no mitranga amin'ny kara-panondrony, ny pasipaorony na amin'ny karatry ny banky, izay mbola hanondroana azy ho Tomás Adrián ihany. Mitranga izany na dia teo aza ny fanovana taovam-pananahana nataony tany Thailandy tamin'ny 2002 sy ny fangatahana nataony tany amin'ny Fitsarana Tampony roa taona taoriana mba hankatoavana ny mari-panondroana azy vaovao.
Mihoatra ny folo taona taty aoriana, mbola eo am-piandrasana ny valiny hatrany izy.
Tsy izy irery no manan-draharaha eny amin'ny fitsarana tahaka izany, ary tsy izy ihany koa no fanta-daza indrindra momba izany. Raharaha efa miely izany ao amin'ny fiarahamonina LGBT any Amerika Atsimo. Mariazim-pitoviana, fiovana anarana tsotra na mahalahy/vavy ao amin'ny karapanondro ary fiarovana araka ny lalàna ho an'olon-droa miaraka no sasantsasany fotsiny amin'ny lohahevitra mila kitihina iadian-kevitra ao amin'ny parlemanta.
Amin'ity toedraharaha ity dia mahatalanjona ny fipongaran'ireo kandidà trans [nanova taovam-pananahana] any amin'ny fifidianam-paritra. Nirotsaka tao amin'ny lisitry ny Voluntad Popular, antokon'ny fanoherana ao amin'ny distrikan'ny renivohitra izy.
“Tsy niditra antoko mihitsy aho teo aloha, fa efa nandray anay tsara ny Voluntad Popular,” hoy ny nolazainy tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny Skype.
Noresahan'i Adrián ny “trosan'ny” Antenimieram-Pirenena Venezoelana amin'ireo vitsy an'isa ara-pananahana isankarazany.
Miharihary kokoa ny tsy fisian'ny fankatoavana ao Venezoelà raha ampitahaina amin'ny zavamisy amin'ny firenena manodidina. Efa mankato ny mari-panondroana ny trans i Amerika Latina iray manontolo. Raha jerena ny ao Meksika, Kolombia, Ekoadaoro, Orogoay, Arzantina ary Shily, Efa azo atao, tsy mila fandidiana, izany fankatoavana izany. Raha jerena ny ao amin'ny faritra dia tratra aoriana i Venezoela. Saingy izy no firenena Amerikana Latinina voalohany nankato ny mari-panondroana ny vahoaka trans tamin'ny 1977.
Talohan'ny 1998, dia antonta-taratasim-piovana mari-panondroana 150 no efa nankatoavina, saingy tsy nisy intsony izany nanomboka hatreo, hoy i Adrián. “Nitranga izany noho ny lasitra nisy tamin'izany fotoana, rehefa tsy maintsy natao aloha ny fandidiana,” hoy ny fanazavany. Taorian'izany dia nisy ny fiovana ara-politika teo am-pelantanan'ny Hugo Chávez. Nisy ireo fikambanana ara-piarahamonina sy ara-politika tao amin'ny faribolan'ny governemanta niezaka ny hampiditra ny fangatahan'ny LGBT ao amin'ny adihevitra ara-politika, saingy tsy noraharahian'ny sangany mitondra ry zareo.
“Indrisy moa fa tsy azon'ny Chavisma ny endrika maoderina maro noho ny fahamaroan'ny soritra maro dia maro tahaka ny militarisma, fisoloantena evanjelika be loatra, tsy firaharahiana ny zon'olombelona ary ny fampiofanana Marxista-Leninista-Stalinista natao ny mpitarika azy. Ireo ambony ireo no nitsitaitaika niteraka ny tsy fisian'ny fanoloran-tena hikarakara ny fiarahamonina LGBT,” hoy i Adrián, izay niofana ho mpahay lalàna tao amin'ny Oniversite Katolika Andrés Bello ao Venezoelà sy tao amin'ny Oniversite Panthéon-Assas tao Paris.
Araka ny hevitr'i Adrián, tsy mitaratra ny fihetseham-pon'ny fiarahamonina venezoelana manoloana ny zon'ireo fiarahamonina ara-pananahana isankarazany ny toerana ijoroan'ny governemanta [ny hevitry ny governemanta]. Tiany ihany koa ny manazava fa tsy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBT rehetra no miaraka amin'ny antokon'ny fitondrana PSUV (Antoko Sosialista Tafaray eto Venezoelà), fa miely mihoatra ny antoko iray ny fijery ara-politikan'izy ireo.
Hita ao amin'ny media sosialy fa miabo ny setriny avy amin'ny 97 isanjaton'ny olona amin'ny asa ataony miaraka amin'ny Voluntad Popular. Vitsy ihany ny setriny miiba avy amin'ireo mpankasitraka tafahoatra avy amin'ny mpivavaky ny Opus Dei, vondrona evanjelika ary ny Chavistas. Jerendry zareo ho fandrahonana amin'ny propagandiny ny firotsahako ho kandidà, izay mametraka fa ‘amin'ny alalan'ny revolisiona’ ihany no azo tanterahina ny fankatoavana ny zonay. Mety ho nahomby izany propagandy izany fito taona lasa izay raha tsy nananjò ny faritra, saingy tsy nanan-tsafidy intsony ry zareo.